Custom P20 inserts Custom various inserts assembled in mold without fitting Item: Precision PX5 inserts Process : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC- လမ်းလျှောက်ပိုး- EDM - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: P20 Tolerance: ±0.003mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ,…
Chrome Pin Guide Item: Pin Guide supplier Process : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: SKS3 Tolerance: ±0.005mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ, final QC reports Processing time 10 နေ့ရက်များ ပို့ဆောင်ခြင်း။: 3~7 days by DHL/UPS/FedEx express, air freight…
Guide bush Guide bush with Japan quality Guide Bushing Item: Guide bush manufacturer Process: Milling-CNC-Heat treatment-Grinding-Polishing Material: P20 Tolerance: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs, ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ, final QC reports Processing time7နေ့ရက်များ ပို့ဆောင်ခြင်း။: 3~7 days by DHL/UPS/FedEx express,…
Precision PX5 inserts Custom various inserts assembled in mold without fitting Item: Precision PX5 inserts Process : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC- လမ်းလျှောက်ပိုး- EDM - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: PX5 စာနာထောက်ထားမှု: ±0.003mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ,…
Plastic gear mold core insert The materials for core inserts are alternative, such as SKD61,S136. NAK80,8407 and SKD11 etc., Casting ထည့်သွင်း | Ceramic mold inserts | Insert die casting machines | Cooling inserts for molds | Die cast threaded inserts Die casting tooling inserts | Die casting parts and products…
Electric appliance mold insert Start can manufactureavariety of custom plastic mold parts, mold core အပါအဝင်, ကလိုင်, ထည့်သွင်းပါ။, slider, lifter, pin စသည်တို့, ဆေးပညာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။, မော်တော်ကား, house appliance, အရုပ်, အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။, ပစ္စည်း: Precision mold insert, used in electrical appliance field by grinding processing and walking silk processing, finish with…
Cosmetic mold part Cosmetic inserts are one of the mold parts, mold core အပါအဝင်, ကလိုင်, ထည့်သွင်းပါ။, slider, lifter, pin စသည်တို့, ပစ္စည်း: Precision mold core insert, assembled with the core, used in cosmetics field, by grinding processing and walking silk processing, လုပ်ငန်းစဉ် : CNC- Heat treatment –Grinding-CNC- walking silk-EDM Material: SKD 11 သည်းခံစိတ်: +/-0.005mm အဖြစ်…
Plastic shell mold insert The material for mold inserts is not unique, SKD61. SKH51. ASP23 and SKD1 are alternative. ပစ္စည်း: Precision mold insert, core insert, core block, custom insert Process : ကြိတ်ခြင်း။ - CNC - အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - CNC- လမ်းလျှောက်ပိုး- EDM - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: S136 စာနာထောက်ထားမှု: +/-0.003မီလီမီတာ…